ဘကျစုံပို့ဆောငျရေးလိုငျစငျကိုငျဆောငျထားသူဖွဈသငျ့တယျ ဘာအကြိုးရှိတယျဆိုတာ ? - Logistics Guide
ဘာလဲဗြ MTO ?
ကြှနျတျောတို့ MTO ဆိုသညျမှာ Multimodal Transport Operator ကိုဆိုလိုပါတယျဗြ မွနျမာလိုဆိုရငျတော့ ဘကျစုံပို့ဆောငျရေးလိုငျစငျကိုငျဆောငျထားသူပေါ့ဗြာ ။
ဘာလဲဗြ Multimodal Transport ဆိုတာကိုအရငျလငျးစမျးပါအုနျးဗြ
ဘကျစုံပို့ဆောငျရေးဆိုသညျမှာ အနညျးဆုံး2Mode နှငျ့2different Countries & two or more different means of transportation ကြျော၍သယျယူပို့ဆောငျတာကို ဘကျစုံပို့ဆောငျရေးလို့ချေါပါတယျဗြ
Means ဆိုသညျမှာ ဥပမာ Airplane,Truck,Ship,Rail
Mode. ဆိုသညျမှာ ဥပမာ Land,Air,Sea
Node. ဆိုသညျမှာ ဥပမာ Sea Port,AirPort
Ok အခုလညျးအဲ့လိုလုပျပွီးသှားနတျောဟုတျလားဗြ ဘာအားသာခကျြရှိလို့လဲဗြ
မှနျပါတယျ အခုလညျးသှားနကွေပါတယျ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံ မှာ Freight Forwarder တှကေ အဆငျ့ဆငျ့နိုငျငံအလိုကျ တဈခွား Agent ကို အားကိုး Carrier ကိုအားကိုး B/L အဆငျ့ဆငျ့ထုတျ ပွားစှနျးစားနကွေရတယျဗြ အဲ့တော့ MTO သာဖွဈရငျ နိုငျငံတဈကာ Carrier တှကေို Scahule ထုတျပေးပွီးကိုယျပိုငျတာဝနျယူပွီး Multimodal Transport Document တဈခုထဲနဲ့ ကွိုကျတဲ့ Destination ကို Try လိုရသှားပွီ ကွိုကျတဲ့ Mode ပွောငျး ကွိုကျတဲ့ Means ပွောငျး ကွိုကျတဲ့ Node ပွောငျး အေးဆေး Handle လုပျလို့ရသှားမှာပါဗြ ထို MTO လိုငျစငျဆိုတာလညျး နိုငျငံတဈကာမှာ ရှိပါတယျဗြ မွနျမာမှာ MTO လုပျထားပွီးရငျ တရားဝငျလုပျကိုငျနိုငျပွီဖွဈတယျဗြ။
Ok နားလညျပွီ MTO ဖွဈဖို့ဘာတှလေိုအပျလဲဗြ
MTO Rule/Law ကလညျးထှကျထားပွီးပွီ အဲ့မှာလညျးထညျ့ထားတယျဗြ လှယျတော့မလှယျဘူး MTO ဖွဈပွီး အစအဆုံးတာဝနျယူရမှာဖွဈလို့ အားလုံးကိုယျ့တာဝနျသာဖွဈမှာဗြ လိုတာတှကေ UNESCAP /FIATA /MIFFA /ထိုမှ အသိမှတျပွုလကျမှတျ ရရှိထားသူဖွဈရမယျ ကိုဆကျသှယျလုပျကိုငျမညျ့ ပွညျပတှငျ Company ရုံးခှဲရှိရမညျ ပွီး Deposit ရှိရမညျဘာညာပေါ့ဗြာ Multimodal Transport Law မှာတော့အတိကပြွဌာနျးထားတယျ ဗြ ကြှနျတျောကတော့ ကြှနျတညျေ တို့နောကကျမှ Logistics လုပျကိုငျလာတဲ့သူတှအေတှကျအခှငျ့အရေးလို့မွငျတယျ။
ကြှနျတျောတို့နောကျပိုငျးခတျေစားလားမဲ့ Combine Transport /Intermodal Transport /Multimodal Transport တှဖွေဈတဲ့အတှကျ Logistics လုပျကိုငျနသေူမြား knowledge ပွညျ့ဖို့တော့လိုမယျဗြာ international မှာ ဘာတှဘေယျလို ပို့ဆောငျရမလဲဆိုတာ Create လုပျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျပါ
Combine Transport ကှဲပွားခကျြ က သူက Same Unitload ဖွဈရမယျဒါပဲ
Intermodal Transport ကှဲပွားခကျြက different two countries ဖွဈစရာမလိုဘူးဗြာ ဒါပဲ
ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်သင့်တယ် ဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ?
ဘာလဲဗျ MTO ?
ကျွန်တော်တို့ MTO ဆိုသည်မှာ Multimodal Transport Operator ကိုဆိုလိုပါတယ်ဗျ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူပေါ့ဗျာ ။
ဘာလဲဗျ Multimodal Transport ဆိုတာကိုအရင်လင်းစမ်းပါအုန်းဗျ
ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး2Mode နှင့်2different Countries & two or more different means of transportation ကျော်၍သယ်ယူပို့ဆောင်တာကို ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ
Means ဆိုသည်မှာ ဥပမာ Airplane,Truck,Ship,Rail
Mode. ဆိုသည်မှာ ဥပမာ Land,Air,Sea
Node. ဆိုသည်မှာ ဥပမာ Sea Port,AirPort
Ok အခုလည်းအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားနေတ်ာဟုတ်လားဗျ ဘာအားသာချက်ရှိလို့လဲဗျ
မှန်ပါတယ် အခုလည်းသွားနေကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မှာ Freight Forwarder တွေက အဆင့်ဆင့်နိုင်ငံအလိုက် တစ်ခြား Agent ကို အားကိုး Carrier ကိုအားကိုး B/L အဆင့်ဆင့်ထုတ် ပြားစွန်းစားနေကြရတယ်ဗျ အဲ့​တော့ MTO သာဖြစ်ရင် နိုင်ငံတစ်ကာ Carrier တွေကို Scahule ထုတ်ပေးပြီးကိုယ်ပိုင်တာဝန်ယူပြီး Multimodal Transport Document တစ်ခုထဲနဲ့ ကြိုက်တဲ့ Destination ကို Try လိုရသွားပြီ ကြိုက်တဲ့ Mode ပြောင်း ကြိုက်တဲ့ Means ပြောင်း ကြိုက်တဲ့ Node ပြောင်း အေးဆေး Handle လုပ်လို့ရသွားမှာပါဗျ ထို MTO လိုင်စင်ဆိုတာလည်း နိုင်ငံတစ်ကာမှာ ရှိပါတယ်ဗျ မြန်မာမှာ MTO လုပ်ထားပြီးရင် တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဗျ။
Ok နားလည်ပြီ MTO ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဗျ
MTO Rule/Law ကလည်းထွက်ထားပြီးပြီ အဲ့မှာလည်းထည့်ထားတယ်ဗျ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး MTO ဖြစ်ပြီး အစအဆုံးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်လို့ အားလုံးကိုယ့်တာဝန်သာဖြစ်မှာဗျ လိုတာတွေက UNESCAP /FIATA /MIFFA /ထိုမှ အသိမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားသူဖြစ်ရမယ် ကိုဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မည့် ပြည်ပတွင် Company ရုံးခွဲရှိရမည် ပြီး Deposit ရှိရမည်ဘာညာပေါ့ဗျာ Multimodal Transport Law မှာတော့အတိကျပြဌာန်းထားတယ် ဗျ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တေည် တို့နောကက်မှ Logistics လုပ်ကိုင်လာတဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးလို့မြင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းခေတ်စားလားမဲ့ Combine Transport /Intermodal Transport /Multimodal Transport တွေဖြစ်တဲ့အတွက် Logistics လုပ်ကိုင်နေသူများ knowledge ပြည့်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျာ international မှာ ဘာတွေဘယ်လို ပို့ဆောင်ရမလဲဆိုတာ Create လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ
Combine Transport ကွဲပြားချက် က သူက Same Unitload ဖြစ်ရမယ်ဒါပဲ
Intermodal Transport ကွဲပြားချက်က different two countries ဖြစ်စရာမလိုဘူးဗျာ။
ကားအမည်ပြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိချင်နေကြတဲ့ အခွန်ရုံးလိပ်စာများ